Calan Aim An
First of dhan, oo aad Ujeedada, waxa la sameeyo.
In aannu kiiskan waa shaashadda of video asalka ah:
Waxaan rabnaa in aan si ay ula socdaan labada dhibco (One on farta iyo mid suulka) iyo dhigay qoraal ah oo u dhaxeeya in la raaco ay tilmaam siin (Eebe saamayn farood iyo zoom).
Samaynta Curiska New iyo Keenista Video ah
Si aad u samayso mashruuc cusub, in aan sameynaa ka kooban cusub. Tan waxaa la samayn karaa oo ag maraya in ay bar menu ka dibna riix "Curiska", hoos u soo dejiyey menu muuqan doonaa, guji "Qaab dhismeedka cusub" oo markaas dhigay Magaca, size iyo mudada video finalka. Xaaladdan oo kale, waxaan u magacaabay in ay "socodka" waqtiga 5 ilbiriqsi.
Waxa kale oo aad ku samayn kartaa xaq u riixaya "Project" Tab iyo markaas adigoo gujinaya "Qaab dhismeedka cusub".
Haddaba dajiyaan video ah oo ay xaq u gujinaya tab mashruuca ka dibna ku soo dejinta iyo ka dibna "File", ka dibna daaqad laga furi doonaa halkaas oo aanu isticmaali kartaa file video our.
File video A waxaa lagu arki karaa tab mashruuca.
Si aad u dajiyaan file video si aad halabuurka, riix video ku saabsan tab mashruuca ka dibna u jiidin tab raadraaca on hoose ee Adobe dib markii suuqa kala Raadka.
Furitaanka tracker ah
Waxaan furi karin tracker ag maraya in ay bar menu oo guji Window, ka dibna ku Tracker (haddii aan la hubiyaa).
Tab Tracker A iyadoo la furay ee geeska midig hoose ee Adobe dib markii suuqa kala Raadka.
Waxaan ku arki kartaa 4 fursadaha halkan, oo la odhan jiray "Camera Track", "laalaab stabilizer", "Track Motion" iyo "Negaanshaha Motion". Ayaa mid ka mid doorasho oo ka mid ah isticmaalka yahay "Track Motion". Sidaas awgeed, waxaan u riix doonaa. Xasuuso, ka hor inta gujinaya ah "Track Motion" button, video waa in la soo xulay, ee "Socodka" tab.
Sidoo kale, sida aan rabno in aan u dhawrtaan miisaanka iyo xagal, waxaan riix doonaa "Jago, wareegga iyo Miisaanka" doorasho.
Halkan yimaado qaybta ugu muhiimsan ee raadraaca mooshinka oo la "Dejinta dhibcood ka raadraaca".
Markii aan riixi ah "Track Motion" button, laba god oo lagu arki karaa suuqa kala kooban.
Haddii aad si dhow u dhawrtaan, waxaa jira square ah gudaha square kasta.
Square guduhu waa gobolka Feature iyo square dibadda waa gobolka raadinta.
Gobolka feature wuxuu qeexayaa element ee lakabka in la wasakheeyey. Gobolka feature waa isku wareejiyeen element ah oo kala duwan muuqaal ah, iyadoo la doorbidayo hal shay adduunka dhabta ah. Ka dib markii Raadka si cad u aqoonsan kartaa track ee keydinta duration isbedelada iftiinka, asalka iyo xagasha.
Gobolka raadinta wuxuu qeexayaa aagga in dib Dhibaatooyinka baadhi doonaa si ay u helaan muujinta dabagal. Feature ayaa dabagal u baahan yahay inuu kala duwan oo kaliya gobolka raadinta gudahood, ma jir oo dhan gudahood. Confining raadinta gobolka ah raadinta yar oo uu tashiilo waqtiga goobidda iyo habka raadinta sahli, laakiin halis ah muujinta ah dabagal ku tagay gobolka raadinta gebi u dhexeeya loox.
Hadda waxaan ka sarraysiin doonaa laba dhibcood. In hadii aynu leeyihiin si ay ula socdaan calaamado ku saabsan farta iyo suulka. Sidaas awgeed, waxaan ka sarraysiin doonaa labada dhibcood ee calaamadaha ah.
Si aad u billowdo raadraaca, waxaan riix doonaa button play oo loo arki karaa qaybta hoose dhinaca midigta ee suuqa (Falanqeeyaan menu) ah.
On dagdag ah haddii tracker ee iska tagaa wadada, ma jirto wax laga walwalo. Raadraaca ayaa la aqbalsan yahay karo oo lagu baabi'in karo ee meesha sanduuqyada square tagay dhibcood, waxaan ku xasil karo trackers ku barta oo xiiso leh mar labaad, ka dibna waxaan dib u bilaabi karaan raadraaca.
Si aad u heshid la-socod oo sax ah, waxaan u helida qodobada, jir by jir, adigoo riixaya batanka soo socda inuu ka ciyaaro button (ee Falanqeeyaan menu). Iyo jeeg jir raadraaca by jir.
Marka raadraaca la soo gabagabeeyo, waana arki doonaa shaashadda this.
Abuurid wax anshax
Haatan waa inaan u sameeyo shay waxba si uu u siiyo dhibcood raadraaca.
Taas aawadeed, waxaan xaq u guji doonaa suuqa kala raadraaca ka dibna riix cusub, ka dibna "wax anshax".
Si aad u siin dhibcood raadraaca in tracker ah, waxaan guji doonaa "diirada Edit" Button on tab Tracker ah. Window A muuqan doonaa, halkaas oo aanu guji doonaa "lakabka" ka dibna ku soo daadiyaa menu, waxaan dooro doonaa noo shay waxba guji "OK".
Ka dib markii in aan guji doonaa "codso" Button qaybta hoose dhinaca bidix ee suuqa. Window A muuqan doonaa oo waa in ay leeyihiin "X iyo Y" ee hoos u soo dejiyey menu. Waxaan guji doonaa "OK".
Ku darista shay si Raac Track ah
Sida aan rabno in aan qoraal kasta oo in la raaco mooshinka, sidaas darteed waxaan abuuri doonaa qoraalka wax cusub oo ay xaq u gujinaya ah "socodka" Window, markaas on "New", ka dibna "Text".
Waxaan ka dibna qori doonaa qoraalka oo u qotomiyey sida ay noo jecel yahay.
Hadda, si ay u sameeyaan qoraalkan, raacna Jidka, waxaan guji doonaa oo kaliya icon aarayo ku xigta qoraalka ah, ee "socodka" tab iyo waxa jiidi on lakabka shay waxba.
Hadda waxaan guji doonaa boos laga ciyaaro video iyo si loo hubiyo in aan ka helay wixii aan doonayay ama aan.
Sida wax walba oo soo martay midig, waxaan hadda karnaa video ah.
Haya'ad Video ah
Si aad u Gudaan video ah, guji "Curiska" on bar menu oo guji "Add moodo safka".
Tab cusub oo ka muuqan doontaa hoose dhexe ee suuqa.
Si aad u dhigay qaab video, waxaan guji doonaa "sameecadda ah" oo la furi doona suuqa kala ah halka aan dooran kartaa qaabka iyo wax miiran "OK" ka dib doorashada.
Si aad u dhigay folder caga, waxaan si fudud u riixi kartaa magaca ka dib "Output in ay" sii jeeda ee "Socodka" tab.
Marka ay dhamaato waxaan guji doonaa "siiya," Button, ee "socodka" Tab.
Our Video Final ayaa diyaar u ah in lagu arko.
Sida loo Copy DVD on OS X Mavericks
> Resource > Video > Sidee si ay ula socdaan Dhaqdhaqaaqa in Adobe ka dib Raadka